प्रचारप्रचार व्यापक बनाउंदै डा. पौडेलको टिम, आइतवार लसएन्जल्समा अन्तरक्रिया | khaltinews.com
प्रचारप्रचार व्यापक बनाउंदै डा. पौडेलको टिम, आइतवार लसएन्जल्समा अन्तरक्रिया
२०७४ साउन ७
अमेरीका- गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएन )अमेरीकाको आसन्न निर्वाचनमा दोश्रो कार्यकालका लागी अध्यक्षमा प्रत्यासी डा. केशव पौडेल र उहांको टिमले प्रचारप्रसारलाई तिब्र पारेको छ ।
गत साता कोलोराडो तथा नर्थ क्यारोलिना पुगेको डा. पौडेल सहितको टिमले आउंदो आइतबार क्यालीफोर्नियाको लसएन्जल्समा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्न लागेको हो । साउर्दन क्यालिफोर्नियामा बसोबास गर्ने नेपालीहरुको सक्रियतामा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्न लागिएको हो ।
अन्तरक्रियाका क्रममा डा. पौडेल र उहांको टिमले आफ्ना एजेण्डा र भावी योजनाका बारेमा सहभागी नेपालीहरुलाई जानकारी दिने बताइएको छ । आर्टिसियास्थित तारा हिमालय कुजिनमा बेलुका साढे सात बजेपछि शुरु हुने कार्यक्रममा सहभागीताको लागी सबैमा आग्रह गरिएको छ ।
बिभिन्न शहरमा नेपालीहरुमाझ भेटघाट तथा प्रचारप्रसारलाई तिब्र पार्ने क्रममा आइतवार लसएन्जल्समा हुन लागेको कार्यक्रममा सहभागी हुन लागेको डा. पोडेलले बताउनुभयो । डा. पौडेललाई टक्कर दिन सक्ने अध्यक्षका उम्मेद्धारका रुपमा हेरिएका डालसका व्यवसायी गौरी जोशीको उम्मेद्धारी निर्वाचन समितीले रद्ध गरेपछि डा. पौडेल अझै बलियो रुपमा देखिनुभएको छ । अव अध्यक्षका लागी डा. पौडेल सहित बर्तमान कार्यसमितीका बरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्ण पोखरेल तथा उपाध्यक्षद्धय रबिना थापा र राम सि पोखरेल प्रतिस्पर्धामा छन् ।
अव यही २४ तारिख सम्म उम्मेद्धारी फिर्ता लिन सकिने छ भने उम्मेद्धारहरुको अन्तिम नामावली यही महिनाको २९ तारिखमा प्रकाशित हुनेछ र अर्को महिना अगष्ट ११ र १२ तारिखमा निर्वाचन हुने कार्यतालिका छ । निर्वाचन अन्र्तगत एनआरएन अमेरीकाको लागी २३ पद तथा २६ स्टेट च्याप्टरका लागी प्रत्येकमा ११ पद र ८ आइसीसी सदस्यका लागी मतदान हुनेछ ।